नेपथ्य संगीत समुह सग दुबैमा आगो लागाए नेपालीहरुले - दुबैमा पनि नेपालीपन - Khabar Nepali
होमपेज / प्रवास / नेपथ्य संगीत समुह सग दुबैमा आगो लागाए नेपालीहरुले – दुबैमा पनि नेपालीपन
नेपथ्य संगीत समुह सग दुबैमा आगो लागाए नेपालीहरुले – दुबैमा पनि नेपालीपन
नेपथ्य संगीत समुह अर्थात् नेपथ्य ब्याण्ड नेपालको चर्चित ब्याण्ड हो। यसका प्रमुख गायक अमृत गुरूङ हुन् । छेक्यो छेक्यो देउराली डाँडा देखि सा कर्नाली सम्मका चर्चित गीतहरू यो समुहले गाएको छ । लोक भाकाका गीतलाई त्यसको मेलोडी नमारी युवा पुस्ताले रूचाउने किसिमका पप शैलीमा गाउनु यो समुहको विशेषता हो ।
शुक्रबार बेलुकी यहाँ कन्सर्ट सकिने बित्तिकै नेपथ्यका अगुवा एवं मुख्य गायक अमृत गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा एउटा छोटो भिडियो हाल्दै लेखेका थिए– ‘सबैभन्दा पहिले हामी……, धन्यवाद दुबई, माया र साथको लागि’
४० सेकेण्डको भिडियोमा एउटा गीतको अधुरो लाइन थियो जसलाई दर्शकहरुले पुरा गरिदिएको दृश्य देखिन्थ्यो ।
गीतका यी हरफहरुलाई अमृत सँगसँगै दर्शक भीँडले पनि गाएर साथ दिएको थियो ।
यसरी गीतले माहोल तताइरहेकै बेला बीचमा अमृतले चिच्याएर सोधेका थिए – ‘सबैभन्दा पहिले हामी……?’
दुई घन्टा लामो कन्सर्टबाट त्यो भिडियो केहि सेकेण्डको भएता पनि सम्पूर्ण कन्सर्टको माहोल वर्णन गर्ने प्रतिनिधि दृश्य थियो त्यो । दुबइको ‘अल नासेर लिजर ल्याण्ड’ मा मञ्चमा बसेका कलाकार र दर्शकदिर्घा पुरै अवधिभर एकअर्काको समागममा जमेका थिए । अमृतले यसरी सामाजिक सञ्जालमा राखेको भिडियो केहि समयमै भाइरल बन्न पुग्यो र एक घन्टाभित्रै विश्वभर छरिएका दस हजार दर्शकले हेर्न भ्याइसकेका थिए भने सयौंले त्यसलाई सेयर पनि गरिदिए ।
दर्शकदिर्घामा आयुष मान डंगोल पनि देखिन्थे । उनी सारजहास्थित एयर अरेबियाका पाइलट हुन् । आयुषसँगै उनका ‘एयर होस्टेस’ साथी सुष्मिता ताम्राकार पनि थिइन् । नेपथ्यलाई बुधबार संयुक्त अरब इमिरेट्स पुर्याउने वायुयानमा उनीहरु दुवैजना उडान टोलीमा संलग्न थिए ।
प्राय: यात्राको क्रममा कसरी गीत तयार पार्नु हुन्छ नि ?
म पैदल यात्रा गर्न मन पराउने मान्छे हुँ । प्रत्येक पटकको यात्राको क्रममा एक–दुई वटा गीत तयार पारिरहेकै हुन्छु । यात्राले स्थानीय जनजीवनलाई नजिकबाट बुझ्ने मौका प्रदान गर्छ । त्यो बुझाइले नयाँ गीत नै तयार भैदिन्छ ।
देश–विदेशको यात्रा गरिरहनु हुन्छ । सबैभन्दा मनपर्ने ठाउँ कुन हो ?
पोखरा । मैले संसारका धेरै ठाउँ देखें, तर पोखरा जस्तो सुन्दर र रमणीय ठाउँ कहिंपनि भेटिन् । पोखराको सौन्दर्य शब्दमा वर्णन गरेर साध्यै छैन ।
बाहिर बस्ने नेपाली समुदायबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु हुन्छ ?
हाम्रो ब्याण्डले झन्डै २८ वटा देशमा प्रस्तुती दिइसकेको छ । नेपाली समुदाय बाहिर भएका कारणले नै हामी कलाकारहरू विदेश जाने संगति प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएका हौं ।
‘चट्ट रुमाल’ लाई थोत्रे गीत भने पछि विवादमा मेलिना